ဇော်ငြိမ်းအေး ( ဆေး - ၂ ): April 2016
ဘာသာပြန် - နိုင်းနိုင်းစနေ (April. 26. 2016)
သာမန်လူတစ်ယောက် စာကြည့်တိုက်ထဲရောက်သွားတယ်။ စာအုပ်စင်ပေါ်က များပြားလှတဲ့စာအုပ်တွေကို ကြည့်ပြီး သူ့မျက်စိမွဲပြာ (ပျာဝေ) သွားတယ်။ ဒါဟာ ဒီလောကမှာရှိတဲ့ အသိပညာဗဟုသုတတွေကို သူနည်းနည်းမှ စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲ။
အသိဉာဏ်ပညာသုတေသနပြုမှုမှာ လူတိုင်းပါဝင်စရာမလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အထူးစိတ်ဝင်စားမှုတစ်ခုတော့ လူတိုင်းမှာရှိသင့်ပါတယ်။ ဥပမာသတင်းစာကြည့်တယ်.. တချို့က သတင်းကဏ္ဍကို စိတ်ဝင်စားတယ်၊ တချို့က ဝတ္ထုဆောင်းပါးကို စိတ်ဝင်စားတယ်၊ တချို့ကလည်း ကုန်သွယ်စီးပွားရေးကို စိတ်ဝင်စားတယ်။ စိတ်ဝင်စားမှုတစ်ခုခုရှိသူတိုင်းက သတင်းစာတစ်စောင်ရတာနဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုကို သူတို့ရလိုက်ပြီဖြစ်တယ်။
Posted by Zaw Nyein Aye at Tuesday, April 26, 2016
သတိထားမိသလောက် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူ၊ ရပ်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့သူတွေဟာ သူများတွေရဲ့ ချီးမွမ်းခြင်း၊ ကဲ့ရဲ့ခြင်း၊ အသိအမှတ်ပြုခြင်း မပြုခြင်း၊ ကျေးဇူးတင်ခြင်း မတင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာ သိပ်ပြီး ခံစားလေ့မရှိဘူး။
ချီးမွမ်းခံရလည်း ဘဝင်မြင့်မသွား၊ အောက်ခြေလွတ်မသွားသလို၊ ကဲ့ရဲ့ခံရလို့လည်း လုပ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အရာတွေကို နောက်မဆုတ်ပစ်တတ်ဘူး။ သူ့တန်ဖိုး သူသိတယ်၊ ဘယ်သူဆုံးဖြတ်ပေးတာကိုမှ မခံဘူး။
Posted by Zaw Nyein Aye at Monday, April 18, 2016
မှတ်သားဖို့ စကားလုံး (၁၀)လုံး
သားတို့သမီးတို့အတွက်သိမှတ်ဖွယ် စကားလုံး ၁၀ လုံးကို ဆရာပြန်မျှဝေပါရစေ....
၁။ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ ပထမဆုံး စကားလုံး " ငါ " ဆိုတာပါ။
တတ်နိုင်သလောက် ရှောင်ကြဉ်ပါ။ တတ်နိုင်သလောက် "ငါ" အတွက်ရယ်လို့ မစဉ်းစားပဲ ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေအတွက်ပါ ထည့်စဉ်းစားပြီး ပြုမူဆောင်ရွက်ကြပါ။
၂။ ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ ၂ ခုမြောက် စကားလုံးက "ငါတို့" ဆိုတာပါ။
အမြဲတမ်း အသုံးပြုနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ "ငါ့"ဘဝ ဆိုတာထက်"ငါတို့ မိသားစု" "ငါတို့လူမျိုး" "ငါတို့နိုင်ငံ"ဆိုတဲ့ အများအတွက်ပါထည့်ပြီး စဉ်းစားပေးတက်တဲ့ စိတ်ထားမျိုးရအောင် မွေးမြူပါ။
၃။ အဆိပ်အပြင်းဆုံး ၃ ခုမြောက် စကားလုံးက "မာနတရား" ပါ။
မာနတရားကို မွေးမြူမထားပါနဲ့။ သတ်ပစ်ပါ။တစ်ခါတစ်ရံမှာ မခံချင်စိတ်နဲ့ မာနတရားကို အမှတ်မှားတတ်ကြတယ်နော်။
၄။ လူတွေ အသုံးအများဆုံး ၄ ခုမြောက်စကားလုံးက "ချစ်ခြင်းမေတ္တာ" ပါ။
တန်ဖိုးထားပါ။ ကိုယ်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့သူတွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ချစ်သော မျက်စိနဲ့ အကောင်းဘက်က ရှုမြင်ပြီး မေတ္တာထားနိုင်ပါစေ။
၅။ ကျေနပ်စရာ အကောင်းဆုံး ၅ ခုမြောက် စကားလုံးက "အပြုံး" ပါ။
ထိန်းသိမ်းပါ။ ဘဝမှာ ကြုံဆုံလာမယ့် လောကဓံတရားတွေကို စိတ်ပျက်အားငယ်မနေပဲ အပြုံးနဲ့ ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါ။
၆။ အမြန်ဆုံး ပျံ့နှံ ့ကူးစက်နိုင်တဲ့ ၆ ခုမြောက် စကားလုံးက "ကောလဟာလ" ပါ။
လျစ်လျူရှှုထားလိုက်ပါ။အခုလို မြန်ဆန်တဲ့ အင်တာနက်ခေတ်ကြီးထဲမှာ မမှန်ကန်တဲ့ ကောလဟာလတွေအပေါ် ခံစားမနေပဲလျှစ်လျူရှုထားပြီး ကိုယ်လုပ်သင့်အလုပ်ကိုသာ အာရုံစိုက်ပြီး လုပ်ပါ။
၇။ အခက်ခဲဆုံး ၇ ခုမြောက် စကားလုံးက "အောင်မြင်မှု" ပါ။
ဆွတ်ခူးရယူနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ အောင်မြင်မှုဆိုတာ နေ့ခြင်းညခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သဘောပေါက်ထားပါ။ ဖြတ်လမ်းနည်းနဲ့အောင်မြင်မှုနောက်ကို မလိုက်ပါနဲ့။
အဲဒီလို ဖြတ်လမ်းနည်းနဲ့ ရတဲ့ အောင်င်မြင်မှုက ရေရှည်မတည်မြဲဘူးဆိုတာ နားလည်ထားပါ။လောကမှာ တကယ်အောင်မြင်တဲ့လူတွေဟာ တိကျပြတ်သားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထားရှိပြီး အဲဒီရည်ရွယ်ချက်နောက်ကို အားမလျှော့ပဲ ဉာဏ်ပညာ၊ ဇွဲ၊ လုံ့လ၊ ဝီရိယတွေကို အချိုးကျပေါင်းစပ် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ သူတွေပါ။
၈။ အန္တရာယ် အရှိဆုံး ၈ ခုမြောက်စကားလုံးက "မနာလိုခြင်း" ပါ။
ဝေးဝေးနေပါ။ မနာလိုခြင်းဆိုတာ နိမ့်ကျတဲ့ စိတ်တစ်ခုပါ။ မနာလိုခြင်းဟာ အရမ်းပူလောင်တဲ့ မီးစတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သန့်စင်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ နှလုံးသားကို လောင်ကျွမ်းစေနိုင်တဲ့ သဘောရှိတယ်လို့ မှတ်ယူထားပါ။ မနာလိုခြင်းဟာ အကုသိုလ်တရားကို တိုးပွားစေပါတယ်။ ဆင်ခြင်တုံ့တရားကို ယုတ်လျှော့စေပါတယ်။
၉။ အစွမ်းထက်ဆုံး ၉ ခုမြောက် စကားလုံးက "အသိဉာဏ်ဗဟုသုတ" ပါ။
ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ရှာဖွေပြီး အရယူနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ ဘဝမှာ အောင်အောင်မြင်မြင် အေးအေးချမ်းချမ်း ဖြတ်သန်းဖို့ ဒီ "အသိဉာဏ် ဗဟုသုတ" ကအရေးပါပါတယ်။ သူရှိမှ ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ ရှေ့ဆက်ရမှာမို့ပါ။
၁၀။ မရှိမဖြစ် အရေးကြီးဆုံး ၁၀ ခုမြောက် စကားလုံးက "ယုံကြည်မှှု" ပါ။
မြတ်နိုးပါ။ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ သူပျောက်ဆုံးရင်တော့ ဘဝမှာရှေဆက်ဖို့ အရမ်းကိုခက်ခဲသွားပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှု၊ မိသားစုရဲ့ကိုယ့်အပေါ်ယုံကြည်မှု၊ ကိုယ်ရှင်သန်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ယုံကြည်မှုရရှိအောင် တည်ဆောက်ကြပါလို့ သတိပေးစကား မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
သားတို့သမီးတို့နဲ့အတူ အားလုံးသော မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအပေါင်းတို့ ကိုယ့်ဘဝကို တန်ဖိုးထား မြတ်နိုးတက်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ အနာဂတ်၊ ကိုယ့်ရဲ့ မိသားစု ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံအတွက် ပခုံးပြောင်းတာဝန်ထမ်းဆောက်နိုင်တဲ့ ယောက်ျားကောင်း ယောက်ျားမြတ်၊ မိန်းမကောင်း မိန်းမမြတ်များ ဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆရာ ဆန္ဒပြု ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
Credit: Hlaing Chit Zaw
Posted by Zaw Nyein Aye at Sunday, April 10, 2016
Labels: Notes (မှတ်စု), တိုးတက်ရေး, ရသစာပေ
ဘာသာပြန် - ဇော်ငြိမ်းအေး
တစ်နေ့မှာ ကျောင်းစရိတ်ကာမိအောင် ပစ္စည်းတွေတစ်အိမ်တက်တစ်အိမ်ဆင်း လိုက်ရောင်းရတဲ့ ဆင်းရဲသား ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာ အိပ်ကပ်ထဲမှာ အသပြာဆိုလို့ ခြူးပြားလေး တစ်ချပ်ပဲ ရှိတဲ့အချိန် ဗိုက်ကလည်း အရမ်းဆာနေသတဲ့။
အဲဒါနဲ့ နောက်တစ်အိမ်ရောက်ရင်တော့ အစားလေး တစ်ခုခု တောင်းစားမယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ထားတာပေါ့။
Posted by Zaw Nyein Aye at Monday, April 04, 2016
Labels: story (ပုံပြင်), ရသစာပေ